बन्दाबन्दीको मौका छोपेर मनोमानी मूल्यवृद्धि « Drishti News – Nepalese News Portal
११ बैशाख २०७८, शनिबार 2:35 pm
राँझा । नेपालगञ्जमा बन्दाबन्दीको मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानीरुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण तीव्ररुपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा यही वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दी जारी गरेको छ । बन्दाबन्दीमा सहज र सरलरुपले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा व्यापारीले कालोबजारी गरी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ ।
उनका अनुसार, आलु मात्र नभई, सिमला खुर्सानी, गोलभेँडा, भिण्डी, करेला, बोडी, बन्दालगायतका तरकारीमा पनि बन्दाबन्दीभन्दा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । नेपालगञ्जको बिपी चोकस्थित तरकारी बजारमा पनि तरकारी खरीद गर्न पुगेका उपभोक्ताले पनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ ।
बन्दाबन्दीको मौका छोपेर अत्यधिक महङ्गो भएपछि तरकारी नै खरीद नगरेर घर फर्किएको नेपालगञ्ज– ६ निवासी गृहणी सिर्जना रानाले गुनासो गरे । उनले भने, ‘लकडाउन भनेर किन्नै नसकिने गरी जथाभावी महङ्गो मूल्य लगाउने गरेका छन् । महामारीका बेला जनतालाई ठग्ने र दुःख दिने काम भएको छ ।’
तरकार मात्र नभई खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पनि नेपालगञ्जमा कालोबजारी ह्वात्तै बढेको छ । ग्यास, नून लगायतका अत्यावश्वकीय वस्तुको कालोबजारी गरी महङ्गो दरमा बिक्री भइरहेको रानाले बताए ।
एकै दिनमा मूल्यवृद्धि गर्न नपाइने र स्टक सामाग्रीलाई पनि मुल्य बढाएर बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि बन्दाबन्दीमा आँखा छलेर मुल्य मेटेर सामाग्री बेच्ने गरेको पाईएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष वसन्त गौतमले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजकसमेत रहेकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले बन्दाबन्दीमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गरेको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन थालिएको बताइन् ।
उनका अनुसार, शुक्रवार गरिएको अनुगमनको क्रममा अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने दुईवटा तरकारी पसल क्रमशः त्रिभुवनचोक स्थित अकरम तरकारी पसल र रानीतलाउस्थित सान अर्डर सप्लायर्सलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९ १ (क)बमोजिम चेतावनी स्वरुप तस्काल जनही रु. २० हजार जरिवाना समेत गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज–१२ सुर्खेत रोड स्थित नसिम जसगढ, ढोडे मुखिया र इरफान राईले सञ्चालन गरेको तरकारी पसल, त्रिभुवन चोक स्थित अकरम तरकारी पसल, रानीतलाउस्थित सान अर्डर सप्लायर्स, एम.एम.आर. अर्डर सप्लायर्स र रानी तलाउ स्थित कृषिउपज बजार संचालक समितिले सञ्चालन गरेको तरकारी मण्डीमा दर्ता÷नविकरण, मुल्य, गुणस्तर, आपूर्ति र उपलब्धताको बिषयमा बजार अनुगमन गरिएको थियोे ।
बन्दाबन्दीको बेला मनपरी मुल्य निर्धारण गर्ने र उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । उनले बन्दाबन्दी मात्रै नभई जुनसुकै समयमा पनि मनपरी मुल्यवृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार, नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण तीब्रगतिमा फैलिएकाले त्यसको रोकथामका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभर अत्यावश्यक सेवाबाहेक हिँडडुलमा समेत निषेध गरिएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु तरकारी, खाद्य, दूध, ग्यासका पसल विहान ६ देखि ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने छ ।